दुर्व्यसनी बाट आफ्नो वच्चालाई बचाउन के गर्नु पर्छ ? – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
दुर्व्यसनी बाट आफ्नो वच्चालाई बचाउन के गर्नु पर्छ ?
चैत्र २८, २०७३ ०६:३८ मा प्रकाशित
इसरोकार संवाददाता चैत २८, नेपालमा गरेको एक अध्ययनले कुलतमा फस्नुको प्रमुख कारण साथीभाइको संगतलाई नै मानेको छ । चुरोट, अल्कोहल, गाँजा हुँदै ट्याब्लेट तथा सिरिन्जसम्मका कुलतमा युवाहरू फस्ने गर्छन् । कुलतमा फस्ने पहिलो समय विद्यार्थीकाल नै हुने गरेको छ । त्यसैले अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी पनि यस्तै संगतमा भए\_नभएको ध्यान राख्नुपर्छ ।
अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको संगतमा कस्ता साथी छन्, ध्यान दिनुपर्छ । उनीहरूलाई पनि वेलावेलामा घरैमा बोलाएर रमाइलो गरेर सो थाहा पाउन सकिन्छ ।
आफ्नो बच्चा घरमा कुन समयमा फर्कन्छ, ध्यान दिनुपर्छ । नियमित समयमा नआई रातिराति घर फर्कने बानी भएमा तुरुन्त सुधार गराइहाल्नुपर्छ ।
बच्चाको कमजोरीलाई अरूसँग तुलना गर्नु हँुदैन । यसले गर्दा उनीहरूमा हीन भावना विकास हुने तथा आत्मविश्वासमा कमी आउन सक्छ । कुलतमा फस्न यस्तो भावनाले पनि सहयोग गर्छ । बच्चाको क्षमता के छ भनेर आफैँले पहिचान गरी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
ट्याब्लेट, गाँजा, ड्रग्सलगायतका लागुपदार्थ सेवन गर्दा गनाउँदैन । तर, त्यस्ता कुलतमा लागेकाहरू निरन्तर एकोहोरिएर बस्ने, अनावश्यक काम गर्ने, आश्चर्यजनक प्रवृत्ति देखाउने हुन्छन् । यस्तो लक्षण देखिएमा शंका गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लागुपदार्थको बानी परेकाहरूले अमिलो परिकार मन पराउँदैनन् । उनीहरू बढी गुलियो खान रुचाउँछन् । बच्चामा आएको यस्तो परिवर्तनलाई पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।
धेरै मुख सुक्ने, वेलावेलामा जिब्रोले ओठ भिजाउने काम गर्छन् । अल्कोहल, चुरोटको गन्ध हटाउन पराग, सुपारी, ल्वाङ, सुकमेलजस्ता मसला बढी खाने गर्छन् । नियमित यस्ता मसला खानेलाई पनि केयर गर्नुपर्छ ।
कुलतमा फसिसकेकाहरूलाई लागुपदार्थ किन्न पैसा आवश्यक पर्छ । त्यसैले धेरै पैसा मागिराख्ने बच्चालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । घरमा निरन्तर बहुमूल्य सामान तथा पैसा हराइरहेको छ भने पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
बच्चा कुलतमा लाग्यो, अब के गर्ने ?
सबैभन्दा पहिला आफ्नो बच्चालाई उसको साथीसंगतबाट छुटाउनुपर्छ । उसलाई सकेसम्म नयाँ वातावरण तथा नयाँ स्थानमा लैजानुपर्छ ।
जतिसुकै राम्रो स्कुल÷कलेज भए पनि हाल अध्ययन गर्दै गरेको संस्था परिवर्तन गरिहाल्नुपर्छ ।
नयाँ स्कुल\_कलेजको प्रशासनलाई पनि सोसम्बन्धी जानकारी दिने र विशेष केयर गर्न लगाउनुपर्छ ।
कुलतमा फसेका छोराछोरीलाई अभिभावकले बढीभन्दा बढी समय दिनुपर्छ । उनीहरूसँगै विभिन्न खेल खेल्दै मनोरञ्जन गर्ने, नयाँ ठाउँमा घुम्न जानेजस्ता क्रियाकलाप गरेर उनीहरूलाई नयाँ वातावरण दिनुपर्छ ।
भर्खरै सुरुवात गर्न लागेकाहरूलाई सम्झाएर, बुझाएर पनि सुधार गर्न सकिन्छ । योग, प्राणायामजस्ता आध्यात्मिक कार्यमा आकर्षित गराउन सकिन्छ ।
आफैँले सुधार गर्न नसक्ने गरी कुलतमा फसिसकेकालाई भने सुधार केन्द्रमा लगेर विशेष प्रशिक्षण दिनुपर्ने हुन्छ ।